OS X Yosemite मा Dock र मेनू पट्टीको रंग कसरी परिवर्तन गर्ने ग्याजेट समाचार
योसेमाइट ओएस एक्समा आमूल परिवर्तन भएको छ। योसेमाइटसँग फ्ल्याट डिजाइन जुन आईफोन iPad र आईप्याड आईओएस with को साथ गत वर्ष आएको थियो, म्याक कम्प्युटरहरूको लागि अपरेटिंग सिस्टमको नयाँ संस्करणमा स्थापना गरिएको छ। सबै आईडीभिस प्रयोगकर्ताहरू जसले उनीहरू गरे डिजाईन परिवर्तन स्वीकार नगर्नुहोस्, जुन आईओएस to देखि आईओएस to मा आईपुगेको skeumorphism छोड्दा, अन्ततः तिनीहरूसँग कुनै विकल्प थिएन, राम्रो वा खराबको लागि भन्दा नयाँ इन्टरफेस समायोजित गर्नुहोस्.
विन्डोजले हामीलाई कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ, एक उपाय भित्र, र ourहरू जुन हामी हाम्रो पीसीमा काम गर्न चाहन्छौं, तर निश्चित बिन्दु सम्म। योसेमाइटले पनि हामीलाई अनुमति दिन्छ शीर्ष मेनू बारको र color्ग र डकको पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्नुहोस्। दुबै एक हल्का पारदर्शिता संग एक खैरो रंग छ। यदि यो हाम्रो रुचिमा छैन भने, हामी यसलाई उपलब्ध एक मात्र रंगको लागि परिवर्तन गर्न सक्छौं: ट्रान्सपरेन्सीहरू सहित कालो।
प्रक्रिया, धेरै जसो म्याकहरू कन्फिगर गर्नका लागि प्रायः जस्तो सामान्य हुन्छ, धेरै सरल छ र महान ज्ञानको आवश्यक पर्दैन। यहाँ हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं हामी कसरी शीर्ष मेनू बार र डकको तल गाढा गर्न सक्छौं (पर्दा तपाईं जहाँ पर्दामा हुनुहुन्छ)।
पहिले हामी आइकनमा जान्छौं प्रणाली प्राथमिकताहरू, डकमा अवस्थित, एक गियरको साथ प्रतिनिधित्व गर्दछ।
प्रणाली प्राथमिकता मेनूमा, हामी पहिलो विकल्पमा जान्छौं जुन नाम छ सामान्य.
खोलिएको नयाँ विन्डोमा, हामी देखा पर्नेछौं र ट्याब चयन गर्नेछौं गाढा मेनू बार र डक प्रयोग गर्नुहोस्। यो ट्याब छनौट हुने बित्तिकै हामी मेनू बार र डकको रंग कसरी परिवर्तन हुन्छौं भनेर जाँच गर्नेछौं।
यदि परिणाम हाम्रो रुचिमा छैन र हामी फेरी ग्रेमा मेनूहरू लिन चाहन्छौं भने, हामीले अवश्य गर्नु पर्छ बक्स अनचेक गर्नुहोस्। त्यो को रूप मा सरल।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » ओएस एक्स योसेमाइटमा डक र मेनू बारको रंग कसरी परिवर्तन गर्ने